RW Rooble oo ku dhawaaqista Golaha Wasiirada ku dhex qariyay arrin xasaasi ah - Awdinle Online
RW Rooble oo ku dhawaaqista Golaha Wasiirada ku dhex qariyay arrin xasaasi ah
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumàda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la sheegey in uu ku dhex qariyey magacaabista Xukuumadda arrin xasaasi ah.
Ku dhawaaqista Golaha Wasiirada ayaa lagu aadiyey xilli Taliyaha Hoggaanka dabagalka la sheegey in uu heshiis lasoo galay Alshabaab Heshiiskaasi oo ku kacaya aduun Lacageed oo gaaraya 10milyan oo dollar, Al-Shabaab ayaa Taas bedalkeeda joojinaya Qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro xilliga kala guurka.
Arrintaan ayaa la sheegey in ay qeyb ka tahay Ololaha Madaxweyne Farmaajo uu ku doonayo in dib loogu doorto, si shacabka muqdisho loo qanciyana ay tahay in amniga isbedel lagu sameeyo.
Arrintaan ayaa imaaneysa xilli sidoo kale Teliyaha NISA uu dalka ka maqan yahay mudo 6 maalmood ah.
Dhinaca kale Teliye kuxigeenka NISA ayaa howlo shaqo ugu maqan Gobolka Gedo isagoona la sheegey in halkaasi uu ka wado guluf dagaal oo dhan ah madaxweynaha maamulka Jubaland.
Xog Hoose oo aan helnay ayaa sheegeysa in Taliyaha dabagalka ee NISA uu si qarsoodi ah ku gaarey degmada Jilib oo ah fariisinka ugu weyn kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Koonfurta Soomaaliya, waxaana la sheegey in uu gaarsiiyey aduun lacageed oo gaaraya 10 malyan oo shabaab ay dalbatey si ay u joojiyaan qaraxyada muqdisho mudo 120 maalmood ah.
Khubarada ka faalooda arimaha ammaanka ayaa arrintaan ku tilmaamay mid qatarteeda wadata walow ay haboontahay in la bedbaadiyo nolosha Bani’aadamka.
Safarka sarkaalkan iyo heshiiska Al-Shabaab lala saxiixdey ayaa lagu soo aadiyay kudhawaaqista xukuumada si aysan saxaafada u ogaan.
Previous articleWada-Shaqeynta Xeer ilaalinta & Maxkamadaha oo gaartay meel xun
Next articleWakiilka QM oo Maanta ka hadlaya doorashooyinka Soomaaliya